I-Sendoso: Khuthaza ukuzibandakanya, ukuThengwa, kunye nokuGcinwa ngePosi ngqo | Martech Zone
I-Sendoso: Khuthaza ukuzibandakanya, ukuThengwa, kunye nokuGcinwa ngePosi ngqo
NgoLwesine, uJuni 11, 2020 NgoLwesihlanu, ngoJuni 12, 2020 Douglas Karr
Xa ndisebenza kwiqonga eliphambili le-SaaS, enye indlela esebenzayo esasihambisa ngayo uhambo lwabathengi phambili yayikukuthumela isipho esikhethekileyo nesixabisekileyo kubathengi esijolise kubo. Ngelixa iindleko zentengiselwano zibiza, utyalo-mali lwalunembuyekezo entle kutyalo-mali.
Ngohambo lweshishini ezantsi kunye nemicimbi irhoxisiwe, abathengisi baneendlela ezimbalwa zokufikelela kumathemba abo. Ungayichazanga eyokuba iinkampani ziqhuba ingxolo engaphezulu ngamajelo edijithali. I-imeyile ngqo iyakwazi ukunyuka ngaphezulu kwengxolo, inyukele phezulu 30x inqanaba lokuphendula nge-imeyile.
Ukuba uyakwazi ukubandakanya abaphulaphuli bakho ngezinto ezimnandi, ezibonakalayo nezikhuthazayo, unokuluqhubela phambili uhambo. I-Sendoso ngumboneleli ngezi nkonzo-ukusuka kukhetho lweemveliso, ukuya kwi-automation, kudityaniso lwentengiselwano, ngokuzaliseka. Esi sicwangciso saziwa njenge ukuthengisa imeyile ngokuzenzekelayo.
Iziphumo ziyamangalisa, abathengi beSendoso baphumelele:
Ukunyuka kwama-22% kwingeniso ngethuba ngalinye
I-35% inyuka kukutshintshelwa kwiintlanganiso
Iipesenti ezingama-60 zeempendulo ezivela kwiiphakheji ezithunyelweyo
Inzala engama-450% kwingeniso evela kwizivumelwano ezivaliweyo
Ukunyuka kwama-500% kumazinga asondeleyo
Usebenzisa idilesi yokuqinisekisa, u-Sendoso angathumela amathemba akho okanye abathengi imveliso eyenzelwe wena, i-egift, etshabalalayo, okanye nayiphi na imveliso ephuma eAmazon. Iqonga likwadityaniswa namaqonga amakhulu okuzenzekelayo, ukuthengisa amaqonga okuzibandakanya, iiCRMs, amaqonga okubandakanya abathengi kunye namaqonga e-ecommerce.
Lungiselela uhambo lwakho lomthengi
Ukwazisa -Thumela amakhadi e-3D ezivelelayo, iincwadana ezinophawu, iibhegi zeetote, iitshaja eziphathwayo, okanye ezinye izinto ezincinane ze-swag ukufikelela kwi-radar yabantu.
isigqibo -Zibandakanye ngokufanelekileyo kwiiakhawunti zakho ojolise kuzo ngokuthumela ii-imeyile ezinemilinganiselo okanye iibhatyi ezikumgangatho ophezulu ezineempawu zelogo.
Ukuqwalasela -Khuthaza umdla kunye nenjongo phakathi kwabaphulaphuli bakho ngee-imeyile zesiko okanye ukuphatha okumnandi okunelogo yakho.
Ukukhawulezisa ukuThengiswa kweFanele yakho
Eminye imizekelo yeemveliso onokuthi uzenzele ukuzithumela:
Ukuvula Iminyango -Yiya edesikeni yomntu endaweni yokulwa kwibhokisi engenayo enento eyenziwe ngumntu evela eAmazon ngenqaku elibhaliweyo elibhalwe ngesandla.
Ukujongana nokukhawulezisa -Zinzisa ubudlelwane kwaye ugqibezele iincoko zothethathethwano ngebhotile yewayini ehambelana nelogo yenkampani yakho.
Abenzi beNtlanganiso -Bandakanya abenzi bezigqibo abaninzi ngaxeshanye ngokuthumela iikeyiki, iikeyiki, okanye ezinye izinto ezimnandi ezinokwabelwana ngeofisi yonke.
Sebenzisa i-Sendoso, inkampani yesoftware kwi-intanethi ukubandakanyeka ngaphandle kweintanethi,ukwazile ukwakha i-100M yeepayipi kunye ne- $ 30M kwingeniso ukusuka kwiphulo elinye. Bathumele iinyanda ezingama-345 kwiiakhawunti ze-ABM, kubandakanya ikhadi lesipho, unyango olumnandi, i-Total Impact infographic, isishwankathelo sokuLawulwa kweMpembelelo zoQoqosho kunye nenqaku elibhaliweyo.
Ukudityaniswa kwemveliso kubandakanya i-Salesforce, i-Salesforce Cloud, i-Salesforce Pardot, i-Eloqua, Hubspot, Outreach, Salesloft, SurveyMonkey, Inempembelelo, Shopify neMagento.
Ukuba unomdla wokufunda ngakumbi malunga nendlela i-1: 1 yokuthengisa okwenziwe ngumntu enokwenza ngayo ulwazi olunomdla lwentengiso kunye nokwakha umbhobho wakho we-post-COVID, cela idemo ye-Sendoso.
Cela iDemo yeSemo
tags: eloquahubspotInempembeleloMagentoukufikelelaukuthengisaukuthengisa uxoleloIlifu lokuThengisa ngokuthengisaIntengisoLoftthengaSurveyMonkey
I-VirBELA: Inkomfa ebonakalayo kwi-3-Dimensions